Imisebenzi yezandla yangempela engama-20 yezingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Imisebenzi yezandla yezingane ezisukela eminyakeni emi-20 kuye kwengu-3 ubudala
Elizabeth Catalan | | Imisebenzi yezandla yezingane
Kusukela zisencane kakhulu, izingane zithanda ukudala ubuciko futhi zithuthukise ubuhlakani bazo. Ukudlala okuningi! Uma ufuna imisebenzi yezandla yezingane ezineminyaka esukela kwemithathu kuye kwengu-3 izingane ezingazijabulisa ngayo futhi zijabule kakhulu, ngikweluleka ukuthi ubheke lokhu okuthunyelwe lapho uzothola khona Yezandla ezingama-20 ezilula kakhulu nezangempela zezingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala.
1 Isibungu esilula sezingane ezinamabhokisi amaqanda
2 Igundane lekhadibhodi lokwenza nezingane
3 I-wand wand ku-3D yokwenza nezingane
4 Umnenke wekhadibhodi ukwenza nezingane
5 I-Catapult enezinti ze-polo ukwenza nezingane
6 Fun dragonfly ukwenza nezingane
7 Maze box ukwenza nezingane
8 Isibungu esinemibala sokwenza nezingane
9 Isihlahla somndeni okufanele senziwe nezingane
10 Umhlobiso wokuhlobana nezingane
11 Shapes game for ezisacathula
12 Uvemvane olulula lwezingane #yomequedoencasa
13 Imbali eyenziwe nge-pasta nemidumba yokwenza nezingane
14 Iketanga lephepha lokwenza nezingane
15 Iziphazamisi zibaleka
16 I-bat funny yokwenza nge-Halloween nezingane
17 Ikhadi lezandla likamama noma lobaba
18 Izinhlanzi zekhadibhodi ezichaziwe, ezilungele ukwenziwa nezingane
19 Izihlahla zikaKhisimusi ezi-3 ezilula ukuzenza nezingane
20 Izikelemu ezinokupakisha kwepulasitiki
Isibungu esilula sezingane ezinamabhokisi amaqanda
Sonke sinamabhokisi amaqanda ekhaya anganikezwa impilo entsha. Ngamanye amabhokisi amaqanda alula kungenzeka ukuthi kwenziwe ubuciko bokuzijabulisa bezingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala. Okokusebenza kuhle ngoba kuphephile ukuthola okuncane kwendlu futhi akusiki.
Ungathanda ukufunda ukwenza isibungu esihle ngamabhokisi amaqanda? Kulula kakhulu! Uzodinga kuphela izinto ezimbalwa. Uma ufuna ukufunda ukuthi ungasenza kanjani lesi sinyathelo ngesinyathelo, ungaphuthelwa okuthunyelwe Isibungu esilula sezingane ezinamabhokisi amaqanda.
Igundane lekhadibhodi lokwenza nezingane
Izingane zizothanda ukudala igundane lazo elincane! Lokhu kungenye yemisebenzi yezandla elula yezingane ezineminyaka engu-3 kuya kwengu-5 yokwenza futhi kubuye kujabulise kakhulu. Abantu abadala bazokwazi ukukwenza cishe bebodwa yize ngokwemvelo kwezinye izinyathelo bazodinga usizo lomuntu omdala.
Izingane zizoba nokuqhuma okwakha leli gundane lekhadibhodi futhi nokudlala ngayo uma beqeda, okungeke kube yisikhathi eside ngoba kuyashesha ukudala. Ngaphezu kwalokho, uzodinga izinto ezimbalwa. Uma ufuna ukubona igxathu negxathu lalo mkhakha, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Igundane lekhadibhodi lokwenza nezingane.
I-wand wand ku-3D yokwenza nezingane
Zonke izingane zithanda ukudlala izindaba zemilingo nezinganekwane. Akukho lutho olungcono ngabo lokuthuthukisa umcabango wabo ngaphandle kokubasiza benze ifayili le- ithoyizi lomlingo. Kulula kakhulu ukukwenza kepha okuncane kuzodinga usizo lomuntu omdala ukuze akwazi ukusebenzisa ingcina nesikele.
Lokhu kungenye yezandla ezilula ezinganeni ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala futhi ngayo izingane zingenza izindaba ezizodlala nazo. Ibizwa nge- "3D" ngoba yenziwa ngokukhululeka. Ungathanda ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani? Bese ubheka okuthunyelwe I-wand wand ku-3D yokwenza nezingane.
Umnenke wekhadibhodi ukwenza nezingane
Okulandelayo kungenye yezandla ezilula futhi ezisheshayo ezinganeni ezineminyaka engu-3 kuya kwengu-5 okufanele zenziwe. Ilungele izingane ukuthi zifunde ukwenza imisebenzi yezandla zodwa futhi ukuze babe nesikhathi esimnandi sokuthuthukisa umcabango wabo.
Izinto ezisemqoka zokwenza lo mnenke ngamakhadibhodi. Ngokuqinisekile unabaningi ekhaya! Ngabe ufuna ukubona ukuthi ungakwenza kanjani? Eposini Umnenke wekhadibhodi ukwenza nezingane uzothola inqubo yonke.
I-Catapult enezinti ze-polo ukwenza nezingane
Abancane bathanda u-ayisikhilimu. Ehlobo omunye wemisebenzi yezandla ebanda kunazo zonke izingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ukwenza lokhu ikatiwane ngezinti. Ngemuva kokudla u-ayisikhilimu, ungayilahli! ungagcina izinti ukwenza lamathoyizi amancane.
Zimbalwa izinto ezidingekayo futhi kulula ukuzithola. Ukwenza i-catapult, kufanele unake imiyalo oyothola kokuthunyelwe I-Catapult enezinti ze-polo ukwenza nezingane.
Fun dragonfly ukwenza nezingane
Phakathi kwayo yonke imisebenzi yezandla yezingane ezisukela eminyakeni emithathu kuya kwengu-3 ubudala, lokhu kungenye yezinto ezilula kakhulu ezingenziwa ngabancane noma ngabe basebancane kakhulu bazodinga usizo lomuntu omdala ukuze ajoyine zonke izingcezu ezikule dragonfly enhle.
Ukwenza ubuciko, uzodinga uqinisa kanye namehlo ahambayo phakathi kwezinye izinto. Uma ufuna ukuthola okusele, ngikweluleka ukuthi ufunde okuthunyelwe Fun dragonfly ukwenza nezingane.
Maze box ukwenza nezingane
Uma abancane bethanda imidlalo ye-puzzle, leli bhokisi le-maze lilungele bona. Ungomunye wemisebenzi yezandla yezingane ezineminyaka esukela kwemithathu kuye kwengu-3 ongayenza ngezinto ezimbalwa, okungenzeka ukuthi usuvele unazo ekhaya: ibhokisi lamakhadibhodi, isikele, izindiza ezinemibala, imabula ...
Ukubona ukuthi kwenziwa kanjani ungabheka okuthunyelwe Maze box ukwenza nezingane. Wonke umuntu uzoyithanda futhi lapho isiqedile bayoba nesikhathi esihle sokujabulisa!
Isibungu esinemibala sokwenza nezingane
Uma unezinsalela zokubamba ezisele kusuka kubuciko be-dragonfly ungabasebenzisa ukuze benze lokhu isibungu esimibalabala, omunye wemisebenzi yezandla ehlekisa kakhulu yezingane ezisukela eminyakeni emithathu kuya kwengu-3 ubudala.
Inqubo yokukhiqiza ilula kakhulu futhi umphumela uyathandeka. Uma izingane zincane kakhulu zizokudinga ukuthi uzisize zikulolonge kodwa ngeke kuthathe isikhathi eside. Uma ufuna ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Isibungu esinemibala sokwenza nezingane.
Isihlahla somndeni okufanele senziwe nezingane
Lokhu kuwubuciko obuthandeka kakhulu ukukwenza namanye amalungu omndeni futhi kungaba njalo isipho esihle sosuku lomama noma lukababa.
Izingane zizokuthanda ukukwenza ukuze abazali bazo bakwazi ukukubonisa ekhaya, endaweni ebalulekile ukuze kubonakale kahle futhi kuthathwe njengomndeni njengesihlahla esikhulu, esiqinile futhi esiqinile. Noma yini eyenzekayo.
Uma ufuna ukwazi yonke imininingwane yalobu buciko bezingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala, ngikweluleka ukuthi ufunde okuthunyelwe Isihlahla somndeni okufanele senziwe nezingane.
Umhlobiso wokuhlobana nezingane
Lokhu kungenye yezinto zobuciko ezilula kakhulu ezinganeni ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala ezingazenzelwa kalula ngabantwana lapho kufika amaholide anjengeHalloween.
Isipoki esihle esenziwe ngezinto ezilula njengekhadibhodi, amakhadibhodi noma i-glue emhlophe. Ngosizo lwakho, abancane bazokwazi ukwenza okuhlukahlukene izipoki ukuhlobisa indlu noma igumbi lakho.
Uma ufuna ukufunda inqubo yokwenza lo msebenzi wobuciko, ungaphuthelwa okuthunyelwe Umhlobiso wokuhlobana nezingane.
Shapes game for ezisacathula
Umdlalo wobunjwa ungomunye wemisebenzi yobuciko ehlekisa kakhulu yezingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ngoba ngaleso sikhathi abancane bahlola futhi bafunde okuningi. Ngalokhu ithoyizi elenziwe ngezinto ezenziwe kabusha Ungabafundisa ubujamo futhi bangabadweba ngisho nokwenza lo msebenzi ndawonye. Bazoba nesikhathi esimnandi!
Uzodinga kuphela amakhadibhodi, umaka omnyama nesikele. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungabuqedela kanjani ubuciko? Bheka okuthunyelwe Shapes game for ezisacathula!
Uvemvane olulula lwezingane #yomequedoencasa
Uma ufuna ubuciko obuningi bezingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala ezilula ukuzenza nomphumela wazo unemibala futhi uyakhanga, uzolithanda loluvemvane oluhle.
Ngeke uze udinge izinto zokwakha futhi ungazisebenzisa ezinye osuvele unazo ekhaya njengezinti ze-ayisikhilimu, amakhadibhodi anemibala, opende noma omaka. Ungathanda ukwazi ukuthi ubuciko benziwa kanjani? Bese ubheka okuthunyelwe Ivemvane elula yezingane.
Imbali eyenziwe nge-pasta nemidumba yokwenza nezingane
Okwabancane ukuzijabulisa ngenkathi ufunda futhi basebenza ngokwedlulele nangamakhono emoto amahle Ungabasiza benze le mbali eyenziwe nge-pasta nemidumba. Luhle kwabancane!
Kudinga kuphela izinyathelo ezimbalwa ezilula nezinto ozoba nazo ngokuqinisekile ekhaya. Lapho lo msebenzi wobuciko wabantwana abaneminyaka emi-3 kuya kwengu-5 usuphelile izingane zizothanda ukuwubona ngoba zizokhumbula ukuthi zizenzele zona. Ukuze ubone yonke inqubo, ungaphuthelwa okuthunyelwe Imbali eyenziwe nge-pasta nemidumba yokwenza nezingane.
Iketanga lephepha lokwenza nezingane
A zakudala yezandla! Ilula kepha imnandi kakhulu futhi ngosizo oluncane ingathokozelwa yizingane zayo yonke iminyaka. Iqukethe iketanga lephepha lapho kusetshenziswa khona umklamo ukuhlobisa igumbi noma ukumane kwaneliswe ukukwenza.
Izingane ezindala zingazama ukukwenza zodwa ngenkathi izingane ezincane zizodinga usizo lwakho nokugadwa kwakho. Kulula kakhulu ukuthi abancane bazofuna ukwenza okuningi nangaphezulu! Bona ukuthi zenziwa kanjani kokuthunyelwe Iketanga lephepha lokwenza nezingane.
Lokhu kungenye yezandla ezilula futhi ezimnandi kakhulu ezinganeni ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala. Uzokwenza ngokukhululeka! Uzodinga kuphela amakhadi anemibala, omaka, izikele kanye notshani.
Ukwenza ukwakheka kwezibungu kuzodingeka usike imichilo eminingana yamakhadibhodi bese uyigoqa. Inqubo ilula kakhulu kepha ungabheka ividiyo kokuthunyelwe Iziphazamisi zibaleka ukubona ukuthi zenziwa kanjani. Kamuva Izingane zingadlala umjaho ukubona ukuthi ngubani onqobayo. Bazoba nokuqhuma!
I-bat funny yokwenza nge-Halloween nezingane
Enye yezandla zezingane ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ubudala lokho ungalungiselela i-Halloween yile bat ehlekisayo. Ngeke udinga ukuthenga noma yini ngoba ungazisebenzisa izinto onazo ekhaya ukufundisa abancane ukuthi zenziwa kanjani.
Uzodinga kuphela amakhadibhodi amnyama namhlophe, umaki, isikele, iglu ... Uma ufuna ukwazi zonke ezinye izinto zokwenza lo msebenzi, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe I-bat funny yokwenza nge-Halloween nezingane.
Ikhadi lezandla likamama noma lobaba
Lo msebenzi wobuciko uyisipho esihle kakhulu izingane ezingasenza kubazali bazo ukubamangaza. Ukwenza lokhu, uma besebancane kakhulu bazodinga usizo lomunye umuntu omdala noma umfowethu osekhulile ukubasiza.
Incazelo yalo msebenzi wobuciko ezinganeni ezineminyaka emi-3 kuya kwengu-5 ubudala yilezo zezandla zengane ezakhekayo inhliziyo yokuzwakalisa uthando azizwa enalo ngabazali bakhe. Ukubona ukuthi kwenziwa kanjani ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Ikhadi lezandla likamama noma lobaba.
Izinhlanzi zekhadibhodi ezichaziwe, ezilungele ukwenziwa nezingane
Enye yezandla ezilula futhi ezihlekisayo ezinganeni ezisukela eminyakeni emi-3 kuye kwengu-5 ongazenza nezingane yile nhlanzi yamakhadibhodi echazwe kahle. Bazoba nokuqhuma ukuyidala bese bedlala ngayo! Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani? Uzodinga izinto ezimbalwa kakhulu. Ungaphuthelwa okuthunyelwe Izinhlanzi zekhadibhodi ezichaziwe, ezilungele ukwenziwa nezingane.
Izihlahla zikaKhisimusi ezi-3 ezilula ukuzenza nezingane
Ngamaholide kaKhisimusi, lo ngomunye wemisebenzi yezandla enemibala egqamile futhi emnandi yezingane ezisukela eminyakeni emithathu kuya kwengu-3 ongayenza ukuhlobisa indlu ngomoya omningi kaKhisimusi. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu futhi ungenza izihlahla eziningana ngesinyathelo esisodwa. Eposini Izihlahla zikaKhisimusi ezi-3 ezilula ukuzenza nezingane Uzokwazi ukufunda yonke inqubo yokukhiqiza nezinto ozozidinga.
Izikelemu ezinokupakisha kwepulasitiki
Unazo iziqukathi zepulasitiki ezingenalutho ekhaya? Musa ukuzilahla! Bazokusebenzela ukwenza lesi sibungu esihle izingane ezingadlala ngaso futhi ube nesikhathi esimnandi. Eposini Izikelemu ezinokupakisha kwepulasitiki ungabona ukuthi kwenziwa kanjani igxathu negxathu.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » Imisebenzi yezandla yezingane ezisukela eminyakeni emi-20 kuye kwengu-3 ubudala
Umnikazi wamakhandlela wokuhlobisa onezinti ze-ayisikhilimu
Isikhwama sepensela esingasindi sasilula
Thola ubuciko namathiphu amasha ku-imeyili yakho.